» मकवानपुरका सांसद रामनारायण विडारीको प्रश्नः पेटी ठेकेदार रातारात अर्बपति बन्ने, गुण्डा लगाएर हामीलाई सिध्याउने ?
मकवानपुरका सांसद रामनारायण विडारीको प्रश्नः पेटी ठेकेदार रातारात अर्बपति बन्ने, गुण्डा लगाएर हामीलाई सिध्याउने ?
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०८:१५
हेटौंडा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रामनारायण विडारीले ठेक्का प्रणाली सुधार गर्न माग गरेका छन्। उनले पञ्चायत कालको प्रणाली अझै कायम रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका हुन्।
उनले ठेक्का अगावै २५ प्रतिशत पेश्की दिने व्यवस्थाको पनि विरोध गरे। ‘पेटी ठेकेदार रातारात अर्बपति बन्ने। अर्बपति भएपछि चुनाव लड्न थाले। अनि जिन्दगीभर राजनीति गरेका राजनीतिक कार्यकर्ताको विरुद्धमा गुण्डा, सारा शक्ति, काला पैसा लगाएर त्यो सरकारी पैसा प्रयोग गरेर चुनावमा कैयौले जित्न पनि सफल भए’, उनले भने।
सांसद विडारीले अहिले संसदमा आएर, काला धनको बाढी बगाएर लोभी पापीलाई किनेर चुनाव जितेको नाटक गरेर संघीय संसददेखि प्रदेशसभा सम्म कुप्रभाव पार्ने, दुरुत्साहन गरेर हैकम जमाउने काम गर्न थालेको गुनासो गरे।
‘पैसा लिने, जग्गा किन्ने, दलाली गरेर संसदमा आएर जुन प्रकारले हैरानी बनाउन थाले, जनविरोधी कानुन बनाउका निम्ति गर्न थाले, यो जनविरोधी काम हो’, उनले भने, पैसा सरकार र जनताको रजाइँ ठेकेदारको।’
सरकारबाट सरकारी ठेक्का वाफत पैसा लिने, त्यो पैसा कर्मचारीले रातारात दिने प्रवृत्ति पनि गलत भएको उनको भनाई छ। ‘आज ठेक्का स्वीकृत भयो, भोलि विहान मिरमिरे उज्यालो हुँदा त चेक काटिसक्यो। कस्ता इमान्दार कर्मचारी, कस्ता हाकिमरु’ उनले प्रश्न गरे।
‘आपका गए ना, बापका गए भन्ने उक्ति छ नी, पैसा सरकारको, जनताको, देशको। मोज ति कालाबजारी र अपराधीहरुको। देश निर्माण ठप्प भयो, निर्माण सारा ठप्प भयो। ठुला नेता रिझाउन पनि तिनै जान्ने, अर्कोमा ति ठेकेदारले नेपाल नेपालीलाई पीडित बनाउने, यस्तोमा कस्तो गर्ने होरु’ उनले प्रश्न थपे। सांसद विडारी बोल्दा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए।